Kufuneka ukondla trolls | Apg29
Kufuneka ukondla trolls
Trolls bafuna ukuthintela abantu ukuba basindiswe ngoko ke umele ungaze kwalusa.
Ngoko ke kukho ajenda emva nokuziphatha kwabo. Ngenxa yoko siphathe Andizange izimvo zabantu ndiyarhana umlingo. Ndikunika ngoko akukho ukudla.
Yintoni i "umlingo"?
A badla kwi internet ngumntu ofuna nje ukutshabalalisa nokuxoxa izinto ezophukileyo izimvo. Awunakho ukuphendula abantu abaye iinjongo ezinjalo.
Loko ndzi sungule le blog Apg29 wazama ngoko amanye amaKristu asabela ezi trolls, kodwa emva kwexesha abekho. Le njongo goblin, ukuba athathe ixesha abantu bakaThixo size singadinwa ngaphandle ukuze bagcina ukuncama.
Trolls lixesha isela, bafuna ukoyikisa imilomo nathi. Ngoko ke kukho ajenda emva nokuziphatha kwabo. Ngenxa yoko siphathe Andizange izimvo zabantu ndiyarhana umlingo. Ndikunika ngoko akukho ukudla.
Le njongo goblin, ukuba athathe ixesha abantu bakaThixo size singadinwa ngaphandle ukuze bagcina ukuncama.
Oku kudla aphikisane nomntu a ukuziphatha badla kuba injongo ukuba ukudala kwimvumelwano ngaphandle intlungu umntu badla phikisana.
Ngokuqhelekileyo I deletar ezinjalo izimvo xa ndiya kuyibhenqa kuba izimvo kufuneka ayondle abanye ukuze ingxoxo banyuke. Kwiimeko ezizodwa kakhulu, ndiye kukhutshwa mazwi ukubona apho amaxolo wathi, yaye kwingoma ke, njalo out.
A imizekelo isosha
Omnye umzekelo okunjalo ezinye izimvo ukuba inqaku "Yabona, ndiya kwenza into entsha" ukuba wabhala ukuba uNyaka oMtsha. Mna kufuneka deletat izimvo kuqala ngqo kodwa bakhetha ukuba wenze njalo. Kwaye ngoko Kwathi njengoko kulisiko xa unika trolls amafutha.
Amagqabantshintshi kwenkomfa beba isihloko senqaku ukuze wafika na umyalezo. Le njongo goblin, ukuba awonakalise lo myalezo amanqaku kunye eninzi izimvo engenamsebenzi. I makhe amagqabaza eme ukubonisa indlela crazy efana oku kuba ukuba anithanga ukuzabalaza "kwi amathupha" ngqo. Kufuneka nanini kwalusa trolls.
A email isosha
Umzekelo izimvo ngaloo nqaku ayikho eyoyikekayo njengoko ngamanye amaxesha kunokuba. Kodwa ndiza kukunika umzekelo: ndifumene i email umntu ozibiza ngokuba ungumKristu kwaye ngekratshi umoya phezulu ulwazi lwakhe kakhulu beBhayibhile. Kanye ngoko lo mntu wathi:
"Mna Ndifumene newsletter evela APG29 kwiminyaka. Ngamana ke uNdikhoyo uThixo kaSirayeli kutshabalalisa Småland onke amaKristu iindimoni kuyaphikisana apho."
Kakade ke, mna andizange ukuphendula ngeposi njengoko engenamsebenzi. Mna ngoko nje e-mail ngakumbi kwaye ngokunjalo ndaphelelwa ixesha kunye nomgudu umntu ongenayo ingqondo ukutshintsha.
Ndafunda ekuqaleni blogging ukuba ndiza kuthabatha ixesha yam emails ezinjalo kunye nezimvo. Kufuneka ukondla trolls! Endaweni yoko, umele ushiye olu hlobo nto ukuze trolls ekugqibeleni iba bebulawa ukuze siqonde ukuba kufuneka baguquke kuYesu Kristu baze basindiswe!
Injongo Apg29 kukubonelela ivangeli kaYesu Kristu ebantwini ukuze baya kuba nako kumamkela baze basindiswe. Ayikho into enokuthintela le. Trolls bafuna ukuthintela abantu ukuba basindiswe ngoko ke umele ungaze kwalusa.
Kananjalo aniqondi I ukuphendula imeyili okanye izimvo ezivela abantu abaye imiba mngeni. Abayi ukukhangela iimpendulo ngenxa yokuba imibuzo ngokunyaniseka, kodwa ufuna ukubuza kuphela. Phendula imeyili okanye izimvo ezinjalo, uya kufumana kuphela omnye ngasekunene imibuzo, uze emva koko omnye wakugqiba wafaka kwakhona elinye ... Musa ukondla trolls!
Musa ukondla trolls
9 Imiqondiso ukuba wadibana phezu badla intanethi